फेन्टरमाइन .37.5 XNUMX.। मिलीग्राम: आधारभूत, साइड इफेक्ट र समीक्षाहरू
फेन्टरमाइन .37.5 XNUMX.। मिलीग्राम
हामीले भेट्यौं 1 उत्पादन तपाईको लागि उपलब्ध छ
मूल्य: कमदेखि उच्च
मूल्य: उच्चदेखि कम
धूम्रपान रोक्ने (2)
तौल घट्नु (2)
फेन्टरमाइन .37.5 XNUMX.? के हो?
फेन्टरमाइन .37.5 XNUMX.।, जसलाई जेनेरिक पनि भनिन्छ एडिपेक्स, एक औषधि हो जुन केवल पर्चेमा उपलब्ध छ। फिन्टरमाइन .37.5 37.5.। एफडीए अनुमोदित छ र phen XNUMX.m मीग्रा फिन्टरमाइन हाइड्रोक्लोराइडबाट बनेको छ। यो गन्ध रहित, सेतो रंगमा, र पानीमा घुलनशील छ। यो एक डाक्टरको निर्देशन अनुसार लिनु पर्दछ, जसको सामान्यतया खाली पेटमा पूरा गिलास पानीको साथ हुन्छ।
किन Phentermine .37.5 XNUMX..XNUMX प्रयोग भएको छ?
यो मोटाई भएका व्यक्तिलाई बढी तौल घटाउन मद्दतको लागि डिजाइन गरिएको हो किनभने यसको प्रयोगको माध्यमबाट वजन घटाउने लक्षणहरू कम गर्न सकिन्छ। यो किनभने Phentermine .37.5 XNUMX..XNUMX को उपयोग को फाइदा मा भूक दमन र ऊर्जा मा एक बुट शामेल छ। यसको कारण यो पिलमा रहेको रसायनहरूले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीसँग मस्तिष्कलाई सोच्न लगाउँदछ कि यसले थोरै खानाबाट पूर्ण महसुस गर्दछ, र यो अनुभूति सामान्य रूपमा भन्दा लामो समयसम्म चल्दछ। यसबाहेक, यसले एक उत्तेजक समावेश गर्दछ जसले ऊर्जाको स्तर उच्च राख्छ जरी तपाईं कम क्यालोरीहरू खाँदै हुनुहुन्छ।
किन म गर्नु पर्छ Phentermine खरीद गर्नुहोस् 37.5?
पछिल्लो रिपोर्टका अनुसार फेन्टरमाइन .37.5 XNUMX.। को उच्च सहिष्णुता क्षमता छ जब अन्य खुराकको तुलनामा। यसले नोरेपाइनफ्रिनको धेरै थोरै मात्रा समावेश गर्दछ र त्यसैले प्रयोगकर्ता मैत्री। धेरै जसो डाक्टरहरूले तपाईलाई यो खुराक लिन यसको सल्लाह दिन्छन्।
यी सुविधाहरूको सन्तुलन फेन्टरमाइन .37.5 XNUMX..XNUMX को एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, किनकि यसले निश्चित गर्दछ कि डाइटरहरूले उचित खानपान र व्यायाम दुवैमा भाग लिन सक्दछन् - प्राकृतिक वजन घटाउने दुई महत्त्वपूर्ण घटक र एक स्वस्थ जीवनशैली - नेतृत्व गर्न सक्ने अप्रिय साइड इफेक्टहरू पीडित बिना। सबै धेरै धेरै विफल हुन डाइट।
यो नोट गर्न महत्वपूर्ण छ, यद्यपि, कि Phentermine 37.5 यसको प्रयोगकर्ताहरू सबै द्वारा सबै वजन कम गर्दैन। औषधि सेवन गर्दा केवल ती अतिरिक्त पाउण्ड फ्याटको पतन हुँदैन। यसको सट्टामा, यो डाइटरहरूले अत्यधिक भोक पीडा वा चरम थकानबाट पीडित बिना उचित कार्य गर्न सम्भव बनाउँदछ।
यस औषधिको प्रभावकारिताले यसलाई सबैभन्दा सामान्य रूपमा निर्धारित बनाएको छ वजन घटाने औषधि संयुक्त राज्य अमेरिकामा मोटोपन भएका व्यक्तिहरूको लागि। यसले ती बिरामीहरूलाई तौल घटाउन र उच्च रक्तचाप, मधुमेह, र उच्च कोलेस्ट्रोल जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।